My Manager Data
Size: 1 564 KB
OS Android ay taageerayaan: 4.0 iyo sare
Laga soo fiirin ugu horreeya ee aad ku arki kartaa in ay tani waa xirfad dhab ahaantii sameeyey codsiga. Screen Main ee app wuxuu u qaybsan yahay in kooxaha si ay u bixiyaan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan user gobolka isticmaalka xogta hadda. On top waxaad ka arki kartaa bar ah, kaas oo kuu ogolaanaya in aad xulan dhexeeya ilo kala duwan isticmaalka xogta. Waxaa jira fursado sida Mobile, barqiyey, Wi-Fi iyo All. Tusaale ahaan, haddii aad doorato tab Wi-Fi waxaad arki doontaa lacagta oo dhan ee xogta la soo helay ama via xiriir Wi-Fi.
Hoos bar ah My Data Muujis waxaan ku sugnaa. Waxay ka dhigan tahay garaaf ahaan maalinta oo dhan si / toddobaadkii isticmaalka / bishii xogta ku jirta qeybta cayimay. Jir Time aad sameyn kartaa in fursadaha ama guji badhanka dhow logo ah. Sidoo kale Maareeyaha My Data ku siinayaa liiska Chine in baabbi'iyee xogta ku jirta qeybta kasta. Waxa aad maamuli kartaa bandhigeen liiska by doorashada Time ama doorasho Data. Waxaad arki kartaa haddii aad ugu adkaysan lahayd qorshe ama aan la isticmaalayo "qorshaha hadda sanduuqa isticmaalka". Halkan waxa aad ka waxaad ka arki kartaa qorshaha isticmaalka xogta, xadka iyo xog inta aad loo ogol yahay in ay isticmaalaan mustaqbalka.
By gujinaya furidda shayga aad ku arki doonaa laba doorasho "Noo dir-celin" iyo "Settings".
Guddi Settings ka kooban yahay afar tabs: "Settings Guud", "Data Plan Settings", "kaabta iyo Soo Celinta", "About". In goobaha guud ee aad korontada karaa ama awood ka baxsan fursadaha sida: farriimaha joogto ah, taas oo muujinaysa icon in bar xaaladda, reporter (qarsoodi tirakoobka isticmaalka in ay ku dhiirigelinayaan in uu), bandhigeen fariin iyadoo ay xulashada si ay awood xogta mar kasta oo app la furo ka dibna xogta yahay dadka naafada ah.
Si aad u dhigay qorshe cusub isticmaalka xogta ama si ay u maareeyaan mid hadda jira waa in aad guji tab "Data Plan Settings". Ka dib markii in aad arki doonaa fursado ah qorshaha xogta category walba: Mobile, barqiyey, ama qorshaha xogta Wi-Fi. Halkan waxa aad sameyn kartaa nooca qorshaha (lacagta dhigay xogta loo ogol yahay inay u baabba'do, waqti iyo nooca qorshe) iyo digniinaha. My Data Manager tusi kartaa heegan mar walba marka aad gaaray line cayiman isticmaalka macluumaadka ama heegan ah maalin kasta.
Si loo soo celiyo ama aad qorshaha isticmaalka xogta jirta gurmad aad u isticmaali karto "kaabta iyo Soo Celinta" tab.
Haddii aad qabto su'aalo qaar ka mid ah ama aad doonayso inaad ogaato qaar ka mid ah macluumaadka aasaasiga ah ee ku saabsan doorashada barnaamijka "About" tab yahay jid toosan.
Aniga barnaamijkan waa u faa'iido badan ee nooc kasta oo user. No user arrinta yahay awow hooyo ama horumariyaha Android qabow, qof walba ka heli doontaa wax soo jiidasho waxa ku jira. Aniga ahaan user interface si fiican u sameeyey oo aad ka heli ugu badan ee macluumaad ka shaashadda. Sidoo kale guddiga goobaha waa wax raaxo leh oo fudud si uu u fahmo, sidaa darteed waxaan ku siin doonaa barnaamijkan mark ugu sareeya.
Top 5 Alternative Apps in Maamul Data
Marka laga reebo "Tababare My Data" waxaa jira waxyaabo badan oo ah barnaamijyo la mid ah, kuwaas oo kaa caawin karaa in aad maamusho isticmaalka xogta aad. Hoos waxaan posted liiska gaaban oo iyaga ka mid ah oo dhinac ay xoog.
Isticmaalka Data 508 KB free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sigterm 4/5
Data ON-OFF 238 KB free https://play.google.com/store/apps/details?id=it.miabit.android.dataonoff 3/5
Data counter widget 281 KB free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roysolberg.android.datacounter 4/5
Onavo Tiri | Isticmaalka Data 1 925 KB free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onavo.android.onavoid 4/5
Kordhisayna Isra'iil | Data Savings 1 495 KB free https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onavo.android.onavoics 4/5
App Cool loogu talagalay dadka jecel minimalism in wax walba oo ay nolosha. Interface user Garaafka saboolka markaas "My Data Manager", laakiin idinku raalli galin karaa hawlihiisa. "Isticmaalka Data" waxay leedahay laba xogta isticmaali qorshe: gacanta iyo Wi-Fi. Wixii qorshe kasta waxaad cayimi kartaa lacagta ugu badan ee xogta iyo muddada waqtiga loogu talagalay ama qarka u saaran inay xad lahayn. Qorshe kasta Meel uu furmo suuqa u gaar ah halkaas oo aad ka eeg cuni karaan maanta xogta iyo isbuucaan, isticmaalka fiican ee qorshaha isticmaalka xogta hadda iyo xaaladda isticmaalka. Sidoo kale "Isticmaalka Data" waxaa ka mid ah hal abuur leh hab heegan. Waxa aad haysataa saddex digniino iyo idinku waajibka ah inaad dhigay marka waa in muuqan. By default qiimaha waa 50%, 75%, 90% ka mid ah xadka xogta. Intaa waxaa dheer, waxaa jira fursado sida: dami Wi-Fi markii xadka la gaadho, soo bandhigista show, fursadaha midab bar horumarka, iyo unit bandhigay xogta. Muuqaal kale waa fursad taariikh. Halkan waxaad ka heli kartaa garaaf xogta loo isticmaalo iyo liiska macluumaadka ku baabba'saday maalin kasta.
Waxaa inta badan widget, laakiin ma app. Faa'iidada ugu weyn waa tutorial kartoon ah oo gaaban ee bilowga ah. Waxay kuu sheegaysaa sida loo awood widget. Sidoo kale user arki kartaa tabs kale: "Settings", "Style" iyo "History". Settings tab leedahay dadka saboolka ah ee hawlaha - awood u ogeysiisyada (haddii codsi kale oo badala isticmaalka xogta qaabeynta Data ON-OFF dirayaa digniin a) iyo goobaha batari (marka auto-Disable data). In "Style" tab aad qaabka icon ku dooran kartaa saddex Hababka dhisay-in. Bandhigyada ee la soo dhaafay Liiska howlgallada ay sameeyeen.
Ujeedada codsiga waa mid aad u fudud. Waxa ay u ogolaataa user ay u wareegaan on / furmaan xiriir 3G / 4G in mid ka mid click on icon widget.
Widget kale oo la FAQ gaaban oo ku saabsan codsiga bilowga ah. Icon Widget bixisaa user macluumaad ku saabsan qadarka xogta loo isticmaalo. Aniga waa arrin waxtar leh. By riixaya icon widget ah Bartan cusub lagu muujiyay. Halkan waxaad tagi kartaa "Statistics tab", taas oo ku siinayaa tirakoobka ee xogta diri / helay muddo sida: bil, todobaadkii, maalin iyo guud ahaan. Sidoo kale waxaad reserved kartaa muuqaalka widget (dhigay midabka sawir, midabka asalka, style, taako mar, raaxayn heerka iyo iwm), qaar ka mid ah goobaha caalamiga ah iyo soo jeedino in ay ku deeqaan isticmaalaya PayPal ama in ay soo iibsato "Data counter widget Pro". Pro ugu muhiimsan waa ay conciseness, laakiin nasiib daro shaqeynta iyo interface user garaafyada ma aha dusheeda.
Onavo Tiri | Isticmaalka Data
Codsiga waxaa loo isticmaalaa si ay ula socdaan isticmaalka xogta mobile. Interface user Garaafka waa cabsi laakiin waxaa ka maqan ka shaqeynayaan. In si kale loo dhigo codsiga Sidee buu u shaqeeyaa loo baahan yahay oo keliya. Dhinaca sare ee shaashadda ugu weyn ee aan ka arki kartaa bar horumar ah, kaas oo kuu sharaxaya qadarka xogta loo isticmaalo. Sida ku app kasta waxaad cayimi kartaa waqtiga. By default waxaa lagu wadaa in uu maalin kasta. Sidoo kale waxaad tagi kartaa "watch App" tab si uu u daawado xogta hadda wax gubaya barnaamijyadooda. Ikhtiyaar kale waxa weeye heli Advice qorshe Data ama arki profile Isticmaalka ah. Haddii aad rabto inaad la wadaagto natiijada oo aad samayn kartaa via "Share doorasho".
Kordhisayna Isra'iil | Data Savings
App Cool la taageero jaantuska xoog qayb kasta tiro. Waxaad ka arki kartaa noocyo kala duwan oo ah jaantus u mar walba oo aad ku qeexan goobaha. Waxa intaa dheer oo aad sameyn kartaa fursadaha sida in goobaha: maamuli khasnado nadiifinta, tayada image dhigay, app heerka on Google Play, akhri FAQ, caawimo iyo aragtida xiriir la taageero. App ayaa farsamo share si ay u wadaagaan natiijada via shabakadaha bulshada.
Function Main ee app waa in la yareeyo baabuurta la barqiyey. Onavo kordhisayna maylka adag dhammaan xogta la barqiyey, oo dukaamada aad ku servers Onavo, si aadan u baahan inaad ku shuban isla images, boorar, xayaysiisyada markaas webpage ah, ka hor kaas oo idin soo booqday aad soo booqato. Sidoo kale waxay siinaysaa qaar ka mid ah ayna si 3G iyo 4G la xidhiidha halka aad diraya images oo gacanta ku haysa aad barqiyey inuu ku soo shirtagi qorshaha isticmaalka macluumaadka xogta.
Isticmaal MobileGo u maamulaan barnaamijyadooda xogta Android
App kale oo qabow si ay u maareeyaan khayraadka xogta aad waa MobileGo. Ujeedada ugu weyn ee app waa in la dadajiyo wax-qabadka ee telefoonka gacanta. App la shaqeeya barnaamijyada user, barnaamijyada nidaamka iyo bixisaa geynta ugu badan halka ciyaaro.
Ka soo kabashada ilaha xogta ku dhow codsiyada aan loo baahnayn.
Si aad u samayn sort in wax waa in aad guji "Click wixii faahfaahin ah" badhanka si ay u arkaan oo dhan laga daadiyo, in la xiri karo iyada oo aan wax yeesho habka.
Ka dib dooran app in, aad rabto in la xiro ama guji "Xir All" button. Haddii ay sidaas sameeyaan, app xiro doono oo dhan Chine oo ay suuragal tahay in la xiro. Waxaad arki doonaa shaashadda hoose.
Jidka Alternative waa in guji "dhaceen" badhanka hoose ee shaashadda oo app xirto doonaa oo xoojiya oo dhan Apps suurto gal ah.
MobileGo sidoo kale optimizes ciyaaraha oo dhan ee aad ka qabto telefoonka smart. Si aad howlgalkan kaliya aad u baahan tahay in guji "Dooro kulan si kor loogu qaado" doorasho (calaamadeeyay cas oo ku shaashadda hoose) oo ka mid ah liiska dooran ciyaarta. In aan tusaale ahaan waa "fuulid Hill" ciyaarta. Sidoo kale waxaad iyaga gacanta ku dari kartaa. Ka dib markii fulinaya click "Yididiilo" button in sida mar walba si kor loogu qaado aad waayo-aragnimo kulanka casriga ah.
Aad Xoojinta camera, internet iyo warbaahinta
Haddii aad rabto in aad si kor loogu qaado camera xiriir aad, Internet ama warbaahinta, MobileGo kuu samayn doonaa, waayo, in tallaabooyin yar oo sahlan. First of dhan aad u baahan tahay si ay u doortaan button menu ah, kaas oo ku sugnaa garoonka xaq ka "kulan Select si kor loogu qaado" doorasho. Ka dib markii dhag siinaya batoonka menu, MobileGo ha aad doorato nooca ayna.
In aan tusaale ahaan waxaan riix doonaa "Yididiilo Media" doorasho. Ka dib markii in baaritaano codsiga garoomada dhammaan codsiyada, kaas oo la tacaalaya warbaahinta ku saabsan telefoonka. Haddii ay heli hagi karin wax kasta oo iyaga si toos ah u weydiiyo user in ay gacanta ku daraynaa. Tallaabada xigta waa la mid kuwa kale - dooran app si kor loogu qaado ama loogu qaado oo dhan adigoo gujinaya "mashruuca horumarinta oo dhan" button.
Marka laga reebo in aad sameyn kartaa MobileGo sida aad rabto. Guddi Settings kuu ogolaanayaa inaad si ay u maareeyaan muujinaya tilmaamayaasha waxqabadka, xusuusinta, cusboonaysiiso codsiga iyo akhri "About" tab si aad u hesho jawaabo ku saabsan su'aashaada. Haddii aad jeclaan app, guji oo kaliya "na Rate" button in la siiyo calaamad in codsiga cajiibka ah. Sida lagu soo gunaanaday, Waxaan ku talinaynaa in codsigan qof walba.
Top 5 Free-adda u Android Apps in Download
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Samsung in HTC
Top 5 App Store u Android Waxaad waa in ay ogaadaan
Android ka Bedelka Content in HTC, oo ka HTC si fudud Android
Sida loo hagaagsan Music inay Android ka PC
Raadi ee Sony Vegas Alternative Best for Windows
> Resource > Android > Manager Top 6 Android Data Si aad ula socoto Isticmaalka Data